Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose. – Bogga Calamada.com
June 30, 2017 6:50 am Views: 186
Aroornimadii hore ee saaka waxa uu dagaal culus ka qarxay qeybo ka mid ah gobalka Shabeelada hoose oo dhaca dhanka Konfureed ee dalka Somaliya.
Dagaalka waxa uu yimid kadib markii ciidamada Kufaarta Afrikaanta oo ay la socdaan maleeshiyaatka dowlada weerar kusoo qaadeen degmada Jannaale oo ay maamulaan Shabaabul Mujaahidiin.
Kolanyada weerarka ah ayaa degmada kasoo weeraray labo dhinac oo kala ah deegaanada Buufow iyo Danow oo ka wada tirsan gobalka Shabeelada hoose.
Shisheeyaha iyo maleeshiyaatka dowlada Ridada ayaa inta ay kusoo jireen wadada waxey la kulmeen Siddeed Kamiin iyo qarax oo lagu gaarsiiyay khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed.
Sida uu xaqiijiyay Wariye Islaami ah oo ku sugan gobalka Shabeelada hoose dagaal culus ayaa ka qarxay gudaha degmada Jananale kadib markii ciidamada Shisheeyaha gudaha usoo galeen degamdaasi.
Dagaal muddo ku dhaw Labo saac ka socday gudaha degmada Jannaale ayaa ugu dambeyntii sababay in ciidamada Kufaarta AMISOM dib uga baxaan degmada oo ay isugu tagaan duleedka degamdaasi.
Dadka degmada Jannaale oo iyaguna la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in gudaha degmada ay ku arkeen meydadka Shan askari oo isugu jira maleeshiyaatka dowlada federaalka iyo kuwa shisheeyaha AMISOM oo kolanyadii weerarka soo qaaday goobta kaga carartay.
Dhowr jeer oo hore ayaa ciidamada Shisheeye sidaan oo kale loogu jabiyay weeraro ay kusoo qaadeen degmada Jannaale oo ah degmadii uu ka dhacay dagaalkii Labo sano ka hor sida ba,an loogu xasuuqay ciidamada Uganda.
اللهم اغز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين allaw gaalada raayada tawxiidka doonaysa inay dajiso allaw qabo allw natus awoodahaaga cajiibka badan allw gaaladda iyo gaalo raacyada islaamka kaqabo aammiin ya rabi